Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Lee Portal Mmelite Ngwa: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Lee Portal Mmelite Ngwa
Apple WWDC Scholarship: Dị ka ụzọ isi nwee ekele maka ndị ahịa ya, Apple na-enye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ. Ọzọkwa, akwukwo a bụ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịma aka iji kwalite agụmakwụkwọ ha.
Ọzọkwa, a na-elekwasị anya na iwulite ikike na mmepe ọrụ mmadụ. Ka o siri dị, ọ dị mkpa ka ị gbalịa. Ọ dịghị ihe ga-efunahụ gị ma ị mee. Agbanyeghị, ị ga-enwe ọtụtụ elele ma ọ bụrụ na a họrọ gị.
Yabụ, ịmụtakwu otu esi / ebe itinye akwụkwọ, gaa n'ihu na-agụ ihe isiokwu a. Ọ ga-eduzi. Ọzọkwa, ọ ga-enye gị ozi niile dị mkpa ịchọrọ.
Banyere ụlọ ọrụ Apple Inc.
Tupu na-ele anya na Apple WWDC Scholarship, rịba ama. Apple Inc. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nke ọtụtụ mba America. Isi ya dị na Cupertino, California. Ọzọkwa, ọ na-echepụta, na -emepụta ma na-ere ndị ahịa elektrọnik, ngwanrọ kọmputa, na ọrụ ntanetị.
Ọzọkwa, a na-ahụta Apple dịka otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ Big Four. Ma nke a dị n'akụkụ Amazon, Google, na Microsoft. Apple si ngwaike ngwaahịa gụnyere:
The iPhonesmartphone na iPad mbadamba kọmputa.
Ọzọkwa, kọmputa Macpersonal na iPod ọkpụkpọ mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọzọkwa, Apple Watchsmartwatch na Apple TV dijitalụ ihe ọkpụkpọ dijitalụ.
Na mgbakwunye, earbuds AirPodswireless na ọkà okwu amamihe HomePod.
Ọzọkwa, Apple nwekwara ọtụtụ softwares. Offọdụ n'ime ha gụnyere macOS, iOS, iPadOS, watchOS na sistemụ arụmọrụ nke tvOS. Steve bụ Jobs, Steve Wozniak na Ronald Wayne hibere Apple na Eprel 1976
Iji ruo eruo itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ Apple WWDC, ị ga-emerịrị:
Bụrụ afọ 13 ma ọ bụ karịa. Ọzọkwa, ma ọ bụ afọ pekarịrị afọ ole dị na ikike dị mkpa. Iji maa atụ, gbara afọ iri na isii na European Union.
Ọzọkwa, debanye aha n'efu na Apple dịka onye nrụpụta Apple. Ma obu buru onye so na Mmemme Mmepụta Apple akwụgoro ụgwọ.
Ọzọkwa, debanye aha na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ akwadoro ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ gọọmentị ụlọ ọrụ ha nhata.
Ọzọkwa, gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ otu ihe. Nke a kwesịrị ịdị n'ime ọnwa 6 gara aga ma na-echere nnabata na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ akwadoro.
Ọzọkwa, bụrụ onye na-arụsi ọrụ ike na nzukọ STEM. A kwenyekwara na iwu kwadoro dị ka nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Ọ dị mkpa ka ị rịba ama ozi ndị a tupu itinye akwụkwọ maka nkuzi nke Apple WWDC. Ewezuga njirisi ntozu ndị dị n'elu, ị ga-ekwenye na ndị a Ihe nkuzi WWDC Usoro na ọnọdụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị kwenyeghị, etinyela ya. Site na itinye akwụkwọ, ị na-ekwenye na iwu niile ga-eke gị. Ọzọkwa, iru eru dị na nkwenye site na Apple. Na ị ga-ekweta na-ekwenyere Apple na-enye ihe ọmụma banyere gị muta ọnọdụ na otu ọnọdụ.
Ọzọkwa, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị mmekọ, ndị enyemaka, ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị na-akwado mgbasa nke Apple Inc. Ọzọkwa, ndị ezinụlọ na / ma ọ bụ ndị bi n'otu ezinụlọ nke ndị otu a erughị eru.
Ntinye ntinye choro maka Apple WWDC Scholarship
Ihe ndị a bụ ihe achọrọ iji zute iji nyefee ngwa gị maka nkuzi Apple WWDC:
Ga-emerịrị mpaghara niile achọrọ na mpempe akwụkwọ agụmakwụkwọ. Na bulite faịlụ niile na akwụkwọ niile achọrọ tupu ị nyefee.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na itinye akwụkwọ dị ka nwa akwụkwọ, rịba ama. Kwesịrị ịnye PDF, PNG, ma ọ bụ JPG nke usoro klas gị ugbu a. Ma ọ bụ ihe akaebe ndị ọzọ dị ugbu a nke ị debanyere aha na ozi kọntaktị maka onye isi gị ma ọ bụ onye isi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na itinye akwụkwọ dịka onye otu nzukọ STEM ma ọ bụ Apple Developer Academy, rịba ama. Ga-enyerịrị PDF, PNG, ma ọ bụ JPG nke ozi ndị otu gị na ozi kọntaktị onye ndu mpaghara gị. A nabatara ihe ederede n'asụsụ niile.
Ọzọkwa, ị ga-enyerịrị ebe egwuregwu Swift wuru na Swift Playgrounds 2.2 ma ọ bụ Xcode 10.1. Agaghị atụle ọrụ Xcode.
Ihe ndi ozo choro maka Apple WWDC Scholarship
Ọzọkwa, ọ ga-abụrịrị na gị onwe gị kere ebe egwuregwu gị Swift. Ma ọ bụ dabere na template egwuregwu Swift na-agbanwegharị nke gị onwe gị. Agaghị atụle ọrụ otu.
Ọzọkwa, ebe egwuregwu Swift gị ga-arụ ọrụ zuru oke ma na-agba ọsọ na Swift Playgrounds 2.2 ma ọ bụ Xcode 10.1. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na Swift Playgrounds 2.2, ọ ga-kachasị iji gosipụta nke ọma na ụdị niile nke iPad Pro.
Ọzọkwa, a ga-ekpebi nnyefe na offline. Ya mere, ebe egwuregwu Swift ekwesịghị ịdabere na njikọ netwọk. Ihe ọ bụla ejiri rụọ ebe egwuregwu Swift gị kwesịrị ịgụnye na mpaghara gị na faịlụ .zip gị.
Ọzọkwa, ị ga-enyerịrị azịza edemede nke ị dere maka ajụjụ niile achọrọ na ụdị akwụkwọ ahụ.
Ọzọkwa, a ga-ede egwuregwu egwuregwu Swift na Swift Playgrounds 2.2 ma ọ bụ Xcode 10.1. Ọzọkwa, ị ga-esoriri na usoro nke Swift Playgrounds Software License Agreement ma ọ bụ Xcode na Apple SDKs License Agreement.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịnyefe otu ngwa maka onye ọ bụla maka nkuzi WWDC nke Apple. Ọ bụ naanị otu agụmakwụkwọ ka a ga-enye onye ọ bụla.
Ọzọkwa, a na-anabata ntinye akwụkwọ naanị site n'ụdị dị na EBE A. A gaghị anabata nnyefe site na ọwa ọzọ ma ọ bụ mgbe emechiri nnyefe.
A ga-ekpebi ntinye akwụkwọ maka akwụkwọ agụmakwụkwọ Apple WWDC dabere na ndị a:
Mmezu teknụzụ enyere na ama egwuregwu Swift.
Ọzọkwa, okike nke echiche dị na ama egwuregwu Swift.
Na mgbakwunye, ọdịnaya nke azịza edere maka ajụjụ dị n'ụdị ngwa ahụ.
Mkpebi niile ndị ọka ikpe mere bụ nke ikpe-azụ na inye akara bụ nzuzo. N'ihe banyere nke eriri, a ga-enye onye anamachọ ihe na-amasịghị onye natara akwụkwọ mmụta na mbụ. Ọ bụrụ na onye nnata enweghị ike ịga, Apple nwere ike ịkpọtụrụ onye na-achọ ya na akara kachasị elu, naanị Apple nwere ezi uche.
Ebumnuche maka iru eru Ngwa maka Apple WWDC Scholarship
Enwere ike ịtụle nrubeisi gị maka nkuzi Apple WWDC ma ọ bụrụ na ọ naghị agbaso ntozu na nrubeisi chọrọ. Ọzọkwa, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ zutere ọnọdụ ọ bụla edepụtara n'okpuru:
Egwuregwu Swift gị anaghị arụ ọrụ n'oge usoro ikpe ikpe.
Ọzọkwa, ọ bụghị gị wuru ebe egwuregwu Swift ị nyere. Ma ọ bụ ihe karịrị otu onye wuru. N'ihi ya, a gaghị atụle ọrụ otu. Ọzọkwa, a gaghị atụle ọrụ ị ga-arụ na ị ga - eme ka ị ghara iru eru inweta ohere agụmakwụkwọ n'ọdịnihu.
Ọzọkwa, ebe egwuregwu Swift gị chọrọ ịbanye.
Na mgbakwunye, ị na-agbaso na / ma ọ bụ tinye koodu nchịkọta na ebe egwuregwu Swift gị iji chọpụta ma ọ bụ soro ojiji ma ọ bụ ndị ikpe.
Ozi Dị Mkpa Banyere Apple WWDC Scholarship
Ọzọkwa, Apple nwere ikikere iji wepụ ikike gị ugbu a na / ma ọ bụ ọdịnihu. Ma ọ bụ gbochie ma ọ bụ kagbuo agụmakwụkwọ gị na / ma ọ bụ ebe obibi n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ:
Nyefere ihe karịrị otu akwụkwọ anamachọ akwụkwọ. Ya mere, a na-ahapụ onye ọ bụla naanị otu nrubeisi.
Ọzọkwa, akụkụ ọ bụla nke nrubeisi gị bụ eziokwu, ederede ederede, ma ọ bụ mepụtara ya.
Engage na-etinye aka ma ọ bụ na mbụ tinye aka na iyi egwu ma ọ bụ omume ndị ọzọ na-emerụ ahụ nke Apple, ndị ọrụ Apple, ndị ọzọ na-enyocha akwụkwọ, ma ọ bụ ndị bịara WWDC
Ọzọkwa, a na-enye gị ohere agụmakwụkwọ wee ghara ịkọ tiketi na ebe obibi gị site na njedebe. Ma ọ bụ nabata ya ma anaghị aga WWDC kwa ụbọchị, belụsọ na Apple kwetara.
Ọzọkwa, ị na-anabata enyemaka njem na / ma ọ bụ ebe obibi mana anaghị achọpụta maka njem na / ma ọ bụ ebe obibi nke Apple mere. Ma agwala onye nnọchi anya Apple tupu oge eruo.
Ọzọkwa, ị na-anọ n'ụlọ ezumike maka ụbọchị dị iche karịa nke Apple haziri na-enweghị ikike edere site na Apple.
Gị, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, na-eme ihe ọ bụla ezubere iji gbochie mmemme WWDC Scholarship. Gụnyere ma na ọnweghị oke ịgha ụgha na-eleghara ndị ọzọ na-achọ inweta agụmakwụkwọ anya iji nweta ohere ka mma inweta mmụta.
Ọzọkwa, ma ọ bụ ịkpọtụrụ ndị ọrụ Apple ka ịrịọ ọgwụgwọ ka mma maka ntinye gị.
((Ma ọ bụ nrubeisi gị) anaghị erube isi na usoro na ọnọdụ ndị a.
Njikọ njikọ maka Apple WWDC Scholarship
Iji mụtakwuo banyere agụmakwụkwọ Apple WWDC (onyinye uru, njedebe na ndị ọzọ) PỊA EBE A.
Biko hụ na ị ruru ihe achọrọ tupu itinye. Ọzọkwa, maka nghọta, biko ị nwere ike ịgafe isiokwu a ọzọ na njikọta agụmakwụkwọ enyere. Nke a ga - enyere aka ịmatakwu ngwugwu nke agụmakwụkwọ. JISIE IKE ka ị na-etinye.
UNIMAID Postgraduate Admission List 2019/2020 | 1st, 2nd & 3rd ogbe
FUGUS Post UTME 2020/2021 Forming Screen, Eligibility na Oge Ikpeazụ
Auchi Polytechnic HND & Post-HND nnabata ụdị 2017 | Akwụkwọ Ndebanye aha na Nchọpụta
Tinye Ugbu a Maka IITA Job na Ibadan maka Postdoctoral Research Fellow maka NEXTGEN Cassava Project
Mpempe akwụkwọ Mbanye nke FirstBank na Ntuziaka - 2017/2018
FUTMINNA Portal www.futminna.edu.ng/ Lelee Mmelite Ngwa Ọhụrụ
International Baccalaureate Diploma Excellence Scholarship 2019 na Mahadum Nottingham
« JAMB UTME Ndebanye aha 2021dị XNUMX Lee Otu esi azụrụ akwụkwọ na itinye
Ihe nkuzi nke ICCR maka ụmụ akwụkwọ Bangladesh 2021/2022 Portal Updates »